Anambra Ga-Eso Rita Uru n'Amụmà Egọ Ọrụ Mmepe Ụlọ Ọba Ego Mba Ụwa
E meela ka a mara na steeti Anambra ga-esonye na steeti ndị ga-erita uru n'amụma ego ọrụ mmepe ime ime obodo, bụ nke sitere n'aka ụlọ ọba ego mba ụwa.
Nke a bụ nke e mere ka a mara site n'ozi a kụpụrụ site n'aka maazị Chudi Mụọjekwu, bụ onyeisi ụlọ ọrụ "State Community and Social Development Agency" bụ ụlọ ọrụ ebumnobi ya bụ ịkwàlite mmepe ime ime obodo ma sitekwa n'ụzọ dị otu ahụ mee ka ndị e nweghị ka ọ ha ha nwee ike irita uru n'amụma ọrụ mmepe, na ihe dị iche iche e ji akwalite ezi ọnọdụ obibi ndụ.
N'ihe gbasaara amụma ego ọrụ mmepe ahụ, ọ kọwara na ime ime obodo dị iche iche ga-echepụta ọrụ mmepe dị ezi mma ha chọrọ, ma bụrụkwa nke ga-agbado ụkwụ n'ịkwàlite ọdịmma na ọnọdụ obibi ndụ ụmụafọ obodo ahụ; nye aka n'ịkwàdo ya bụ ọrụ, leruo ya anya ma chekwabakwa ya nke ọma, ebe ụlọ ọba ego mba ụwa ga-emezị ihe ndị ọzọ fọrọ afọ.
Ya bụ ozi kọwakwara na ọrụ ngo ahụ ga-enye aka n'ịkwalite ngalaba agụm akwụkwọ, ngalaba ahụike, ngalaba mmiri ọñụñụ, ngalaba njem okporo ụzọ n'ime ime obodo, ngalaba ọkụ latiriiki, ngalaba gburugburu na ngalaba ndị ọzọ dịkwa ike mkpà maka mmepe ime ime obodo.
Maazị Mụọjekwu mekwazịrị ka a mara na ọ bụ site n'ezi ọrụ mmepe dị iche iche ọchịchị gọvanọ Willie Obianọ ji n'aka mere steeti ahụ jiri soro na ndị tozuru okè isonye na ndị ga-erita uru na ya bụ ezi amụma.